डोजरको सट्टा जनता आफै सडक निर्माण गर्दै ।। | माण्डवी एफएम
प्रकाशित मिति : २०७५ चैत्र १, शुक्रबार ०७:४२
सरकारले डोजर प्रयोगमा रोक लगाएपछि सेपुङ्गका स्थानीयहरु आफै सडक निर्माण गर्दै ।।
प्यूठान चैत्र ०१
प्यूठान नगरपालिका ३ सेपुङ्गका स्थानीयहरु सडक निर्माणमा जुटेका छन । विकासका लागि सडक अपरिहार्य भएको भन्दै सेपुङ्गका स्थानीयहरु सडक निर्माणमा लागेका हुन् । नेपाल सरकारले १ करोडभन्दा कम बजेटका सडकमा डोजर लगाउन प्रतिबन्ध लगाएपछि सेपुङ्गका स्थानीय सडक निर्माणमा जुटेका हुन् । उनीहरुले गाउँमा सडकको पहुँच पुराउनका लागी जनश्रमदान गरी सडक निर्माणमा जुटेका हुन् । गाउँमा ८ बर्ष पहिला सडक निर्माण भएको थियो । तर समयमै मर्मत नहुदाँ हिडडुल गर्न समस्या भएको थियो । सडक गुणस्तरिय तथा समयमै निर्माण गर्नका लागि जनताहरु स्वतस्फूर्त रुपमा आफै सडक स्तरोन्नती गर्न जुटेका हुन् । सरकारले डोजर प्रयोगमा रोक लगाएपछि स्थानीय आफै सडक निर्माणमा लागेको प्यूठान नगरपालिका वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष प्रेम बहादुर हमालले बताए । ‘सरकारले साना आयोजनामा डोजर प्रयोगमा रोकेपछि स्थानीय रोजगार पनि पाएका छन’ उनले भने,‘यो निर्णयले जनताको आयआर्जनमा सहयोग पुग्छ ।’ अहिले सेपुङ्गका स्थानीय महिला पुरुष मिलेर ३ किलोमिटर लामो सडक स्तरोन्नती गरिरहेका छन् ।
प्यूठान नगरपालिका वडा नं. ३ ले सडक स्तरोन्नती गर्न २ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । खदचौर,डाडागाउँ,सेपुङ्ग हुदै रोल्पा देउराली जोड्ने ३ किलोमिटर लामो सडक स्थानीयवासीको संक्रियतामा निर्माण भइरहेको छ । एकसाता पहिलेदेखी निर्माण थालिएको सडक केहि दिनमै सम्पन्न हुने प्यूठान नगरपालिकाका मेयर अर्जुनकुमार कक्षपतिले बताए । गाउका २४ जना महिला र १२ जना पुरुषले सडक निर्माण गरिरहेका छन । ‘अहिलेसम्म २ कि.मी सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ’ उनले भने,‘बाकीँ १ कि.मी. सडक एक हप्ताभित्र सम्पन्न हुन्छ ।’ सडक निर्माण गरेवाफत महिलालाई ५ सय र पुरुषलाई ६ सय पारिश्रमीक दिएको छ ।
स्वदेशमा काम नपाएर विदेशीन बाधय भएका युवाहरु गाउँमै रोजगारी पाउन थालेपछि खुसी भएका छन । काम नपाएर भौतारिरहेका बेला वडा कार्यालयले सडक निर्माणमा लगाउदा खुसी लागेको स्थानीय दुवा बिकले बताइन् । उनले भनिन्,‘कुनैपनि रोजगारीका अबसर थिएन,दिनभर खाली हात बस्न बाध्य थियौँ ।’ वडा अध्यक्षले सडक निर्माणको योजना सुनाएपछि डोजरको सट्टा आफै सडक निर्माण लागेको उनले बताइन् । ‘गाउँका धेरै युवा रोजगारीका विदेशमा छन’ उनले भनिन्,‘सडक निर्माणमा महिलाहरु धेरै खटेका छौँ ।’ गाउँमा केही समयका लागी स्वरोजगार बन्दा स्थानीयहरु खुसी भएको वडा अध्यक्ष प्रेम बहादुर हमालले बताए ।